Mkpebi mgbochi: Olee mgbe a ga-anabata ya? | Law & More B.V.
blog » Mkpebi mgbochi: Olee mgbe a ga-anabata ya?
Mkpebi mgbochi: Olee mgbe a ga-anabata ya?
Ndi ndị uwe ojii jidere gị ruo ọtụtụ ụbọchị ma ị na-eche ugbu a ma ọ bụ akwụkwọ a mere nke a kpamkpam? Dịka ọmụmaatụ, n'ihi na ị na-enwe obi abụọ banyere izi ezi nke ihe kpatara ha maka ime nke a ma ọ bụ n'ihi na ị kwenyere na oge ahụ dị ogologo. O doro anya na gị, ma ọ bụ ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị, nwere ajụjụ gbasara nke a. N’okpuru, anyị na-agwa gị mgbe ndị ọrụ ikpe nwere ike kpebie ijide onye a na-enyo enyo, site na njide ruo nga, na oge enwere ike itinye oge.
Jide na ajụjụ ọnụ
Ọ bụrụ n ’ejide gị, ọ bụ maka n’ enyo ma enyo enyo na ọ dara iwu mpụ. N'ihe dị otú ahụ enyo, a na-akpọrọ onye a na-enyo enyo na ọdụ ndị uwe ojii ozugbo enwere ike. Ozugbo ọ rutere, a na-ejide ya maka ịgba ya ajụjụ. Ogologo oge nke awa 9 ka enyere. Nke a bụ mkpebi nke onye uwe ojii ahụ (n'onwe ya) nwere ike ime n'onwe ya na ọ chọghị ikike site n'aka onye ọka ikpe.
Tupu i chee na e nwere ogologo oge ijide karịa ka enyere: oge n’agbata 12.00 nke ụtụtụ na 09:00 nke ụtụtụ anaghị agụ kwupụta awa itoolu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ejidere onye a na-enyo enyo maka ịjụ ajụjụ na 11: 00pm, otu elekere ga-agafe n'etiti 11.00 pm na 12:00 am na oge ahụ agaghị amalite ọzọ ruo elekere 09:00 nke ụtụtụ echi. Oge elekere itoolu wee mechie n'echi ya na 5:00 pm
N'ime oge eji eji maka ịjụ ajụjụ, onye uweojii ga-ahọrọ: ọ nwere ike ikpebi na onye ahụ a na-enyo enyo nwere ike ịla n'ụlọ, mana n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ nwekwara ike kpebie na a ga-edebe onye ahụ na-enyo enyo na mkpọrọ.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ka gị na onye ọ bụla na-abụghị onye ọka iwu gị nwee mgbe akpọchiri gị, nke a metụtara ikike onye ọka ikpe ọha ịmanye igbochi ihe mgbochi. Onye ikpe nke ọhaneze nwere ike ime nke a site na oge ejidere onye ahụ a na-enyo enyo ma ọ bụrụ na nke a bụ mmasị nke nyocha ahụ. Onye ọka iwu onye a na-enyo enyo jikọkwara nke a. Nke a pụtara na mgbe ndị ikwu onye ahụ na-enyo enyo na-akpọ onye ọka iwu ahụ, dịka ọmụmaatụ, anaghị enye ya ohere ime ọkwa ọ bụla ruo oge a wepụrụ mmachi ndị ahụ. Onye ọka iwu nwere ike ịnwa imezu nke ikpeazụ ahụ site na ịdebanye ọkwa nke mgbochi megide mmachi ahụ. Ọtụtụ mgbe, a na-emegide mmegide a n'ime otu izu.
Mkpọrọ nwa oge
Mgbapụta mgbochi bụ oge mgbochi mgbochi site na mgbe ịnọghachi na njide nke onye ọka ikpe nyocha. Ọ pụtara na ejide onye na-enyo enyo na-echere ikpe ikpe mpụ. Edebela gị ọzọ n ’ụlọ mkpọrọ? Anaghị anabata nke a maka onye ọ bụla! A na-anabata nke a naanị n'ihe banyere ịda iwu ahụ edepụtara kpọmkwem n'iwu, ma ọ bụrụ na enwere nnukwu enyo nke itinye aka na mpụ mpụ ma enwerekwa ezigbo ihe kpatara eji etinye mmadụ na njide mgbochi ruo ogologo oge. Iwu na-achịkwa ikike mgbochi a n'Iwu nke 63 na seq. Iwu ahụ ma ọ bụ bụrụ na iwu akọwaghị kpọmkwem oke ihe akaebe enwere maka nnukwu enyo a. Achọghị ihe akaebe iwu na nke doro anya na agbanyeghị. A ga-enwerịrị nnukwu ihe puru omume na onye a na-enyo enyo na-etinye aka na mmejọ.
Mgbochi mgbochi na-amalite site na njide ejidere ya. Nke a pụtara na enwere ike ijide onye ahụ a na-enyo enyo nke kachasị nke ụbọchị atọ. Ọ bụ oge kachasị elu, yabụ na ọ pụtaghị na onye a na-enyo enyo ga-anọ n'ụlọ mgbe niile ụbọchị atọ mgbe njigidere njide. Ọ bụ onye osote onye ọka iwu ọha na eze na-ekpebi ịdebe onye ahụ na-enyo enyo ma ọ chọghị ikike n'aka onye ọka ikpe.
Enwere ike ghara ịhapụ onye a na-enyo enyo na njide maka nkwenye niile. E nwere ụzọ ihe atọ dị n'iwu a:
Enwere ike ijide mmadụ ma ọ bụrụ na enyo gị enyo na mpụ dara iwu nke nwere ntaramahụhụ nga afọ isii ma ọ bụ karịa.
Enwere ike ijide mmadụ na mpụ nke ọtụtụ mpụ mpụ edepụtara dị ka iyi egwu (285, paragraf nke 1 na Criminal Code), izu ohi (321 nke Criminal Code), ikpe mkpegharị ikpe (417bis nke Criminal Code), ọnwụ ma ọ bụ mmerụ ahụ dị oke njọ n'ihe banyere ịkwọ ụgbọala n'okpuru mmetụta (175, paragraf nke 2 nke Criminal Code), wdg.
Enwere ike ijide nwa oge ma ọ bụrụ na onye ahụ a na-enyo enyo enweghị ebe obibi ọ bụla na Netherlands ma nwee ike ịtụ mkpọrọ maka mmejọ a na-enyo enyo na ọ ga-eme.
A ga-enwerịrị ihe kpatara iji jide mmadụ ruo ogologo oge. Enwere ike itinye njide ejidere nwa oge ma ọ bụrụ na otu ma ọ bụ karịa nke ihe mgbakwasị ụkwụ akpọrọ na Nkebi 67a nke Usoro Dutch nke Usoro Mmebi Iwu dị, dị ka:
nnukwu ihe ize ndụ iji gbapụ,
mmebi iwu nke nwere ntaramahụhụ site na mkpọrọ 12 afọ,
ihe ize ndụ nke imeghachi azụ na ịda iwu na-ata ntaramahụhụ site na mkpọrọ nke na-agaghị agafe afọ 6, ma ọ bụ
nkwenye ikpe gara aga ihe na-erughị afọ 5 gara aga maka ịkpọ aha mpụ dịka mwakpo, ịkwa iko, wdg.
Ọ bụrụ na ohere dị na ntọhapụ nke onye ahụ na-enyo enyo nwere ike iwe ma ọ bụ gbochie nyocha ndị uwe ojii, nhọrọ ga-yikarịrị ka ịdebe onye ahụ na-enyo enyo na njide mgbochi.
Mgbe ụbọchị atọ ahụ gachara, onye uwe ojii ahụ nwere ọtụtụ nhọrọ. Nke mbu, o nwere ike izipu onye a na-enyo enyo na ulo. Ọ bụrụ na emebeghị nchoputa ahụ, onye ọrụ uwe ojii nwere ike ikpebi otu oge ịgbatị oge njide nke kachasị nke ugboro atọ awa 24. Na omume, mkpebi a adịtụghị ewere. Ọ bụrụ na onye uweojii echee nchoputa ahụ doro anya, ọ nwere ike ịrịọ onye ọka ikpe na-ahụ maka nyocha ka etinye onye ahụ na-enyo enyo.
Onye ọrụ uwe ojii ahụ na-ekwenye na otu faịlụ ahụ ruru onye ọka ikpe na-enyocha ya na onye ọka iwu, wee jụọ onye ọka ikpe na-enyocha ka etinye onye ahụ na-enyo enyo na njide ruo ụbọchị iri na anọ. A na-akpọta onye ahụ a na-enyo enyo si n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii gaa n'ụlọ ikpe ma ọ bụ onye ọka ikpe na-anụ ya. Onye ọka iwu ahụ nọkwa ma ọ nwere ike ikwuchitere onye a na-enyo enyo. Nụrụ abụghị ọha.
Onye ọka ikpe nyocha nwere ike ịme mkpebi atọ:
Ọ nwere ike ikpebi na a ga-anabata ihe onye uwe ojii ahụ kwuru. Mgbe ahụ ka a na-enyo onye ahụ enyo enyo na njide ejidere mmadụ maka oge a ụbọchị iri na anọ;
O nwere ike ikpebi na a ga-eleghara ihe onye uweojii ahụ kwuru anya. A na-ahapụkarị onye ahụ a na-enyo enyo ka ọ laa n'ụlọ ozugbo.
O nwere ike ikpebi ịhapụ nkwupụta ikpe ndị ọka iwu ọhaneze mana ịkwụsịtụ onye ahụ na-enyo enyo na njide mgbochi. Nke a pụtara na onye ọka ikpe na-enyocha ihe na-eme nkwekọrịta na onye a na-enyo enyo. Ọ bụrụhaala na ọ na-emezu nkwekọrịta ndị ahụ, ọ gaghị arụ ọrụ ụbọchị iri na anọ nke onye ọka ikpe ekenyela.
Mkpọrọ ruo ogologo oge
Akụkụ ikpeazụ nke njide mgbochi bụ ogologo oge eji eji. Ọ bụrụ na onye ọkaiwu ọha na eze kwenyere na onye ahụ a na-enyo enyo kwesịrị ịnọ na mkpọrọ ọbụlagodi ụbọchị iri na anọ ahụ, ọ nwere ike ịrịọ ụlọ ikpe maka njide. Nke a ga-ekwe omume nke kachasị nke ụbọchị iri itoolu. Ndị ọka ikpe atọ na-enyocha arịrịọ a ma na-anụ onye ahụ na-enyo enyo na onye ọka iwu ya tupu mkpebi ahụ. Ọzọ enwere nhọrọ atọ: nye ohere, ịjụ ma ọ bụ kwe ka yana njikọta na nkwusioru. Enwere ike ịkwụsịtụ ịkpọtụrụ ndị uwe ojii n'ihi ọnọdụ onwe onye nke onye a na-enyo enyo. Ebumnuche nke ọha na eze na n'ihu mgbochi mgbochi na-atụle mgbe niile megide ọdịmma nke onye a na-enyo enyo na ịhapụ ya. Ihe kpatara itinye nkwusioru nwere ike ịgụnye nlekọta maka ụmụaka, ọrụ na / ma ọ bụ ọnọdụ ọmụmụ, ọrụ ego na ụfọdụ usoro nlekọta. Enwere ike itinye ọnọdụ na nkwụsịtụ nke njide mgbochi, dị ka mmachibido n'okporo ámá ma ọ bụ kọntaktị, nnyefe nke paspọtụ, imekọ ihe ọnụ na ụfọdụ nyocha uche ma ọ bụ nyocha ndị ọzọ ma ọ bụ ọrụ nyocha oge, yana ikekwe ịkwụ ụgwọ nke nkwụnye ego.
Mgbe oge kachasị nke ụbọchị 104 na ngụkọta, a ga-ekpebi ikpe ahụ. Nke a ka ana-akpọ pro forma nụ. Mgbe a na-anụ ikpe ikpe, onye ọka ikpe nwere ike ikpebi ma onye a na-enyo enyo ga-anọrọ n'ụlọ mkpọrọ mgbochi ruo ogologo oge, mgbe niile maka a nke kachasị nke ọnwa 3.
You ka nwere ajụjụ gbasara njide mgbochi mgbe ị gụsịrị edemede a? Mgbe ahụ biko kpọtụrụ Law & More. Ndị ọka iwu anyị nwere ọtụtụ ahụmịhe gbasara iwu mpụ. Anyị dị njikere ịza ajụjụ gị niile ma jiri obi ụtọ bilie maka ikike gị ma ọ bụrụ na enyo gị na mpụ.
Previous Post Onye ọlụlụ gara nke ọma nwere mmezi achọghị ịrụ ọrụ
Next Post Insịns na outs nke ụlọ ọrụ iwu abụọ